Banyere Anyị - Future Valve Group Co., Limited.
Ka ọ dị ugbu a, ngwaahịa Group Valve Group dị na ahịa dị mma n'ọtụtụ mba na mpaghara dịka Europe, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, America na Middle East, wdg. Isi ngwaahịa dị ka ndị a:
Valve ọnụ ụzọ: DN40 ~ DN1000
Valvụ urukurubụba: DN40 ~ DN3000
Valve Gate Knife: DN50 ~ DN2000
Tulee valvụ: DN40 ~ DN600
Valve Ball: DN15 ~ DN600
Valve Globe: DN15 ~ DN500
Valve Ụkwụ: DN50 ~ DN600
Valve Hapụ ikuku: DN50 ~ DN600
Njikọ Rubber: DN15 ~ DN3000
Anyị nwere ike ịnye ihe dị iche iche dị ka nkedo ígwè, ductile iron, steel cast, igwe anaghị agba nchara, alloy steel, steel forged na wdg, dịka ọnọdụ ọrụ si dị. Ngwaahịa a, na -abụghị ime ụkpụrụ China GB, tumadi na -agbaso ụkpụrụ mba dị elu dị ka ANSI, AWWA, MSS, JIS, DIN, BS, wdg iji chepụta, rụpụta ma nwalee.
Future Valve Group guzobere na 1998, mmepụta anyị, ahịa anyị na ngalaba QC etolitela site na obere ìgwè ruo ihe karịrị mmadụ 200, mpaghara ihe ọkụkụ na -ekpuchikwa square mita 50,000 ugbu a. Anyị aghọọla ụlọ ọrụ na -emepe emepe ngwa ngwa nke nwere njikọ chiri anya na ọdịbendị ụlọ ọrụ anyị: Ogo nke mbụ, na Mepụta Ọtụtụ.
Nke ahụ ga -ekwekwa anyị nkwa inye ndị ahịa anyị nkwado siri ike maka ngwaahịa dị elu, ọrụ kacha arụ ọrụ yana nnukwu uru akụ na ụba.
Igwe anaghị agba nchara bọl valvụ, Ogwe bọọlụ Trunnion, Valve Gate Valve, Akuku Globe Valve, Valve Gate Gate, Igwe anaghị agba nchara Gate Gate valvụ,